सुशान्तले गरेका दुई महान काम जुन गुमनाम बने - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सुशान्तले गरेका दुई महान काम जुन गुमनाम बने
सोमबार, असार ८ २०७७
बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपूतको निधनपछि उनीसँग जोडिएका अनेक विषय बाहिर आइरहेका छन्। यस्तैमा अर्को विषयका आएको छ, उनले गरेको एक कराड दान।
दुई वर्ष अघि भारतको केरला राज्यमा बाढी आएको थियो। बाढीबाट लाखौं मानिस प्रभावित भएका थिए। कयौं मानिसलाई खानपिन गर्न पनि समस्या भएको थियो।
यस्तैमा केरलाका वासिन्दाका लागि भारतभरबाट सहयोग जुटाउन खोजिँदै थियो। त्यहिवेला सुशान्तका एक फ्यानले इन्स्टाग्राममा भनेका थिए, ‘मसँग पैसा त छैन। खानेकुरा छ, त्यहि सहयोग गर्न चाहन्छु। कसरी गर्न सकिन्छ?’
. सुशान्तको सम्मानमा बिहारको बाटोको नाम नै सुशान्त सिंह राजपुत राखियो …
. सुशान्तले नचिनेको अंकिताको त्यो प्रेम …
. सुशान्तको निधनमा दुखी हिमांशीले भनिन् : मेरो तन र मन सुशान्तसँगै गयो
त्यसले सुशान्तलाई झ-ट्का लाग्यो। उनले आफ्ना फ्यानलाई भने, ‘म तिम्रो तर्फबाट एक करोड सहयोग गर्छु।’
र, उनले केही समयपछि केरला राज्यलाई एक करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोग गरे। त्यसको स्क्रिनसट सेयर गर्दै लेखेका थिए, ‘मेरो मित्र, जस्तो तिमी चाहन्थ्यौं, मैले त्यस्तै गरेको छु। यो तिमीले यस्तो वेला गरेको हौं, जुन वेला धेरै जरुरत थियो। धेरै माया। माइ केरला।’
उनले सन् २०१८ मा तीन करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ दान गरेका थिए। एक करोड भारतीय रुपैयाँ फ्यानको तर्फबाट तथा एक करोड २५ लाख भारतीय रुपैयाँ आफ्नोतर्फबाट केरलाका मुख्यमन्त्री पिनारायी विजयनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
त्यस्तै, असम राज्यमा पनि बाढी आएको थियो। उनले असमका गभर्नर बीबी आचार्यलाई एक करोड २५ लाख भारतीय रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका थिए।
अहिले दुवै राज्यका वासिन्दा र राजनीतिज्ञले उनलाई सम्झिँदै सहयोग गरेको विषय सेयर गरिरहेका छन्। सुशान्तको केही दिन अघि निधन भएको थियो।
त्यस्तै सुशान्तले आर्मीहरुलाई खाना खुवाइरहेको भिडियो पनि बाहिर आएको छ ।
उनले आर्मीहरुलाई एकदमै माया गर्ने हुनाले बेला बेलामा खाना खुवाउन गइरहने भारतीय मिडियाहरुले बताएका छन् ।
Our hero #Sushantsinghrajput
A post shared by sushantsinghrajput (@sushantsinghrajpuat) on Jun 21, 2020 at 9:52am PDT
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, असार ८ २०७७ २१:१२:३८
Tags :सुशान्त सिंह
कमल थापालाई छाडेर लिङ्देनको समर्थनमा रेखा !
महादेबलाई छाडेर सुरजसँग बिहे गर्दै नागिन गर्ल !
सलमान खानको बुहारी बन्दै सोनाक्षी, पैसाको लागि मुस्लिमसँग बिहे गर्न लागेको आरोप
काजोलको बहिनीलाई कोरोना संक्रमण
कलाकारसँग छमछमी नाच्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले भने ‘म रचना रिमाललाई वान साइड लभ गर्छु’
रातो लुगामा धपक्कै बलेकी नेहा (फोटोफिचर)